Apple iyo Spotify ee wadahadalka si Siri si qoto dheer loogu daro? - KU SAMEEYSAA
ACCUEIL » TECH & TELECOM Apple iyo Spotify ee wadahadalka si Siri si qoto dheer loogu daro?
Caawiyayaasha dhijitaalka ah ee codka dhijitaalka ah waxay gundhig u noqon karaan ficilo badan. Si aan u sii socono oo aan u fududaato nolosha xitaa, waxaan u baahan nahay inaan si qoto dheer u dhexgalno codsiyada. Siri ugu dhakhsaha badan waxay ku sameyn kartaa Spotify.
Haddii mid laga rabo inuu tilmaamo sababta sababta kaaliyayaasha codka sida Alexa ama Kaaliyaha Google ay aad ugu dhowdahay inay la kulmaan macaamiishooda marka loo eego Siriwaxay noqon laheyd sababtoo ah shirkadaha sida Amazon iyo Google waxay dhaqse u fureen saaxiriintooda soosaarayaasha saddexaad. Apple waxay u dhacdaa si la mid ah laakiin si tartiib ah. sida laga soo xigtay warbixin dhowaan, shirkadda Cupertino iyo Spotify ayaa hadda wada hadlaya si ay ugu dhexgalaan Siri qoto dheer barnaamijka cod bixinta muusikada. Tani waxay u oggolaaneysaa Siri inuu sii sii socdo xakameynta muusikadaada.
Waa Macluumaadka soo tabiya wararka. Apple iyo Spotify waxay hadda si wada jir ah uga wada shaqeynayaan sidii ay ku ogaan lahaayeen sida Siri ugu soo bandhigi karto kontoroollada Spotify oo dheeri ah iyada oo loo marayo amarrada codka. Waa laga saari doonaa, dabcan, akhriska cinwaannada, liiska loo yaqaan 'albums' iyo albums. Marka laga soo tago isdhaxgalka Siri, waxay umuuqataa in wadahadaladaani ay badali karaan aragtida Spotify ee Apple.
Kontorool sare oo nidaamka xakameynaya qulqulka muusikada ee ka soo baxa XXXX?
Waa in la yidhaa in labada shirkadood u dhexeeyaan, heshiisku runtii maahan mid kaamil ah. Waqti ka hor, Spotify wuxuu ku eedeeyay Apple inuu ka hortagay in loo isticmaalo HomePod iyo Siri. Sida warbixinta warbixinta ay sheegtey maanta, codku wuxuu umuuqdaa inuu si weyn isu badalay, hadalada oo aad u yar eedeymaha. Way adag tahay in la ogaado haddii is-afgaradkan u dhexeeya labada koox uu u oggolaanayo masraxa qulqulka inuu helo marin hordhac ah oo Siri ah ama haddii ay quseyso kaliya helitaanka qaab-dhismeedka SiriKit ee lagu soo bandhigi doono qalabka 'X XXX' haddii aad tahay isticmaale 'Spotifiy', waxaad u baahan kartaa inaad sugto cusboonaysiinta iOS 13. A fortiori haddii aad rabto inaad wada isticmaasho Spotify iyo Siri. Samir, dulqaad!
Qaar ka mid ah alaabada Apple waxay silcin doonaan cashuurta dhoofinta 10% horraantii Sebtember
Heshiis wanaagsan: -350 € on iMac 5K 27 inji
Barnaamijka cusub ee 'iPad Pro wuxuu bixin karaa moodeel saddex-laab ah
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/apple-et-spotify-en-discussion-pour-integrer-plus-profondement-siri-325224